कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा डा. गौतम नियुक्त – HongKong Khabar
कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा डा. गौतम नियुक्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा डा. जागेश्वरगौतमलाई नियुक्त गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बनाउन सरकारले वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको छ । गौतमले मंगलबारदेखि कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
सन्देश सुब्बाको गजल सङ्ग्रह ‘सम्झनाको आँधी’ को विमोचन